ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: March 2011
Dad picks up daughter from school with helicopter
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအားဖခင်ဖြစ်သူကရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် လာကြို ...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒေကျိူးတက္ကသိုလ်ပရ၀ဏ်အတွင်းလွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ က ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းဆင်း
သမီးကိုချစ်သည့် ဖခင်တစ်ဦးက သမီးဖြစ်သူကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားလူသိများစေရန် ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် သူမ
ထိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသာများစာသင်ခန်းများအပြင်ဖက်သို့ အပြေးအ
လွှားထွက်ပြီးကျောင်းလာကြိုသည့် ရဟတ်ယာဉ်အားကြည့် ရှုခဲ့ ကြသည့် အတွက်ရှန်တုံပြည်နယ်တွင်တည်
ရှိသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်...
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗီဒီယိုကလစ်ပါ အင်တာနက်ပေါ်တွင်တင်ထားခဲ့ သည့် အ
တွက် အထင်ကြီးခံချင်သည့် လုပ်ရပ်အတွက်ထင်မြင်ယူဆချက်အမျိူးမျိူးနှင့် အနိမ့် ပျံရဟတ်ယာဉ်ကြောင့် 
နောက်ပိုင်းတွင်တော့ထိုကဲ့ သို့ တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်းရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်းဆင်းသက်ခဲ့ ခြင်းဟာ တရားဥ
ပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ( တရားဝင်ခွင့် ပြုချက်မရှိခဲ့ ကြောင်း ) သိရှိခဲ့ ရပါတယ်...
" အဆိုပါရဟတ်ယာဉ်ပိုင်အားဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရှန်တုံလေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေးအုပ်ချူပ်မှုအဖွဲ့ 
တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသလို ထိုတက္ကသိုလ်ဝန်းခရီးစဉ်အတွက် ခွင့် ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာတောင်းခံခဲ့ 
ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ်အတွင်းမထင်မှတ်ပဲ ရုတ်တရက်ရဟတ်ယာဉ်ရောက်ရှိဆင်းသက်ခဲ့ ခြင်းဟာ တရား
၀င်ခွင့် ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ပါဘူး..." လို့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
ဒေကျိူးတက္ကသိုလ်ကတော့ ရဟတ်ယာဉ်မောင်းနှင်ပျံသန်းလာသူဟာ ကျောင်းသူလေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်ပြီးသူဟာ
( ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ) ပိုးသတ်ဆေးပက်ဖျန်းပြီးနောက်သမီးဖြစ်သူကို လာရောက်ခေါ်ယူခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ 
A helicopter landed at Dezhou University in China onasunny day.
Apparently, it wasafather - who went to pick up her daughter inahigh profile manner.
The incident has rocked the university, located in Shandong province, with students rushing out of the classrooms to watch the chopper.
A video of the event was posted on the Internet that stirred up an online sensation and worries about the low-altitude flight.
Later, netizens found that it was "illegal" to fly the chopper.
"The company that owns the helicopter had neither registered with the supervisory body - Shandong bureau of Civil Aviation Administration of China - nor filed any application for the flight.
"This means the surprise landing at the university was unauthorised," Xinhua reported.
Dezhou University said that the pilot was the student’s father and he was picking up his daughter after finishing some pesticide-spraying work.
Posted by peter kyaw | at 1:54 PM |3comments
Labels: Source: China Daily
အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ဖြင့်၁၃၂ ပေါင် ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသည့် ဖိုးဝတုတ်ကလေး....
သူ့ ရဲ့ ကြီးမားလေးလံလှသည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို မြေပြင်မှအားယူကာမနိုင်မနင်းဖြင့် ကုန်းထနေခဲ့ ရသည်ကို
ကြည့် ခြင်းအားဖြင့် အသက်လေးနှစ်သာရှိသေးသည့် လုဟောင် ကလေးဟာသာမန်ကလေးငယ်တစ်ဦးမ
ဟုတ်ခဲ့ တာကတော့ သေချာနေပါတယ်...
သာမာန်၊ ပုံမှန်အသက်တူကလေးငယ်တစ်ဦးထက် ငါးဆမျှထွားကြိုင်းဝဖြိုးနေသည့် ၊ ညနေစာတစ်ခါစား
လျှင်ထမင်းသုံးဇလုံကုန်အောင်လွေးနိုင်သည့် ၎င်းတို့ ၏သားကလေးအလွန်အမင်းဝဖြိုးလာခဲ့ ပုံကို မိဘနှစ်
ပါးက ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ဓါတ်ပုံများအရလုဟောင် ကလေးတစ်ယောက်တစ်နေ့ တစ်နေ့ လေးလေးပင်ပင်သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့် ထိုင်
လိုက်ထလိုက်၊ အိပ်လိုက်၊ စားလိုက်ဖြင့် ရှိနေသည်ကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ဖိနပ်တစ်ခါစီးပြီး ထိုင်၇ာကထရတာတာ နွားသတ်နေသလိုပါပဲဗျာ...
သူကလေးကိုမွေးကာစက ၅.၇ ပေါင်သာရှိပြီးကျန်းကျန်းမာမာရှိခဲ့ ရာက အဘယ်ကြောင့် သားလေးဖြစ်သူ
ယခုကဲ့ သို့ အလွန်အမင်းဝဖြိုးလာခဲ့ ရသည်ကိုမသိရှိရကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူ လုယွန်ချင်း နှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ချင်
ယွန် တို့ ကပြောကြားခဲ့ ကြပါတယ်...
မွေးဖွားပြီးလို့ တစ်ပါတ်အကြာမှစပြီး အငမ်းမရ စားသောက် ( နို့ စို့ ) တတ်လာတာကြောင့် သုံးလသားအ
ရွယ်မှစပြီး တစ်နေ့ တစ်ခြားခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကြီးမားဝဖြိုးလာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
၎င်းတို့ အနေဖြင့် သားငယ်အား မည်မျှပင်အစားအစာလျော့ ကျွေး၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားလာကစားခိုင်းစေ
ကာမူ ကလေးငယ်ကတော့ ဝသထက်သာတိုးလို့ ဝလာနေခဲ့ ကြောင်းလည်း မိဘနှစ်ပါးကဆိုပါတယ်...
မိခင်ရောဖခင်ပါ ကလေးငယ်ကို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများများဖြစ်အောင်အမျိူးစုံကြိုးပမ်းခဲ့ ပေမယ့် လွန်ခဲ့ 
သည့်နှစ်တစ်နှစ်မှာပင် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို ( ၂၂ ပေါင် ) တိုးလာခဲ့ ပါတယ်...
လုဟောင်ကလေးဟာ မိဘများနှင့် အတူလမ်းလျှောက်လေ့ ကျင့် ခန်းလုပ်ရလေ့ ရှိပြီး ဘတ်စကက်ဘော
သို့ သော်လည်း လေ့ ကျင့် ခန်းလုပ်နေခဲ့ တာတောင်မှ ၀တုတ်ကလေးကတော့ သကြားလုံး၊ စုပ်လုံးတစ်ခု
ကိုပါးစပ်ထဲထည့်နေတာကို မြင်ရတာကတော့ အံ့ သြလောက်ဖွယ်မရှိပါဘူး...
လိုက်ပွဲပေးပါဗျိူ့ ....ကျောင်းမှကျွေးတာကလည်းဆင့် ပါးစပ်နှမ်းပက်သလိုပါပဲဗျာ...
ကစားလည်းကစား အစားလည်းမပြတ်စေရဆိုသလို၊ သကြားလုံးဝါးယင်းဘတ်စကက်ဘောဆော့ 
သူတို့ မိသားစုနေထိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဂွမ်တုံပြည်နယ်၊ ဖိုးရှန်အရပ်က မူလတန်းကျောင်းလေးမှာရိုက်ထား
တဲ့ ဓါတ်ပုံမှာတော့ အစားအသောက်မက်သည့် ကလေးလုဟောင်တစ်ယောက် ဆရာထံ ထမင်းကုန်နေ
သည့် ခွက်ကလေးထိုးပေးနေတာကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
တစ်ချိူ့ ဓါတ်ပုံများအရဆိုလျှင် သူရဲ့ မို့ ထွက်နေသည့် ပါးစုံကြီးများကြောင့် သူ့ အနေနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုသေ
ချာကောင်းမွန်စွာမြင်ရပါ့ မလားဆိုတာတောင်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ ကြရပါတယ်....
မူကြိုကျောင်းကလေးမှာတော့ သားဖြစ်သူဖိုးဝတုတ်ကို လူတိုင်းကချစ်ကြပေမယ့် အသက်ကလေးကြီးလာ
ပြီး ကိုယ့် ကိုယ်ကိုသတိထားမိလာတဲ့ အရွယ်ကျယင်တော့ သားလေးကို အနိုင်ကျင့် ကြမှာကိုလည်းမိဘနှစ်
ပါးက စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ ကြပါတယ်...
ညနေပိုင်းမှာတော့ လုဟောင် ကလေးဟာ တစ်မနက်လုံးလှုပ်ရှားကစားခဲ့ရလို့ မောပန်းနွမ်းနယ်ပြီး အ
တန်းထဲမှာအိပ်နေတာကိုတွေ့ ခဲ့ ရပါသေးတယ်...
သူကလေးတစ်နှစ်သားကတည်းက မိဘတွေအနေနှင့် အစားအသောက်ကိုဂရုတစ်စိုက်ရှိခဲ့ ပါတယ်...
ကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်သွားရမှာ အကြောက်ဆုံးပဲမို့ သူ့ အမေက ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်ပို့ ရတယ်...
မိခင်ဖြစ်သူ ချန်းယွမ်၊ ဖခင်ဖြစ်သူ လုယွန်ချန်း တို့ နှင့် အတူ နေအိမ်အနီးလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်...
သူနှင့် ရွယ်တူကလေးတွေထက် ငါးဆမျှပိုပြီးကြီးနေလို့ နောင်ဆိုဝိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့် တာခံရမှာကိုမိဘတွေ
ကျောင်းသွားလျှင်လမ်းလျှောက်မသွားချင်သည့်သားငယ်ကိုဆိုင်ကယ်ဖြင့် လိုက်ပို့ လေ့ ရှိသည့် မိခင်ဖြစ်သူ
ကတော့ ယခုအခါမှာတော့ သားဖြစ်သူအလွန်အမင်းဝလာတာမို့ မချီနိုင်တော့ ပါဘူး...
သူတောင်းသမျှမကျွေးယင်လည်း မရပ်မနားငိုနေတော့တာမို့ ကျွန်မတို့ တော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ကျွေးခဲ့ 
လိုက်ရတော့ တာပါပဲလို့ လည်းသူမကဆိုပါတယ်...
" သူ့ ကိုဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကျောင်းလိုက်ပို့ တာကိုတော့သူတော်တော်ပျော်ပါတယ်..." လို့ လည်းသူမကဆိုပါ
သားငယ်ဖိုးဝတုတ်ကို ကစားခုန်စားတာများများလုပ်ဖြစ်အောင် မိသားစုနေအိမ်အတွင်းဘတ်စကက်ဘော
တိုင်လေးတစ်ခုလုပ်ထားပေးပြီး အရပ်ထဲကချောင်းကိုလည်း ရေကူဖို့ မကြာခဏခေါ်သွားပေးပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ ကျင့် ခန်းလုပ်ပြီးတိုင်း ပိုဆာလာတတ်သလို စားလေကိုယ်အလေးချိန်ပို
တိုးလေ၊ ပိုဝလာလေဖြစ်နေခဲ့ ပါတော့ တယ်...
" ကျွန်တော်တို့ သူ့ ကို ဆေးရုံသုံးရုံအထိပြသခဲ့ ပြီးပါပြီ...ဆေးရုံတစ်ခုကတော့သူ့ ရဲ့ ခေါင်းမှာ အကြိတ်တစ်
ခုရှိနေတာလို့ ပြောပြီး၊ နောက်ဆေးရုံနှစ်ခုကတော့ဘာအကျိတ်မှခေါင်းမှာမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...
သူ့ ရဲ့ ဟိုမုန်းဓါတ်တွေကလည်း ပုံမှန်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်လို့ ဆရာဝန်များကဆိုကြပြီး ကလေးအဘယ်
ကြောင့် ဤမျှကြီးထွားဝဖြိုးနေသည်ကိုမသိနိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်....ကျွန်တော်တို့ ကတော့ သူ့ ကျန်းမာရေး
အတွက်သာစိုးရိမ်မိကြပါတယ်...ဒီအတိုင်းသာဆက်လက်ဝလာနေဦးမယ်ဆိုယင်တော့သူ့ ရဲ့ နှလုံးကိုထိခိုက်
လာနိုင်ပါတယ်..." လို့ ဖခင်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်...
လုဟောင်ကလေး တစ်နေ့ ပိန်လာမယ်လို့ တော့ မိဘများကအကြီးအကျယ်မျှော်လင့် နေပါတယ်...
However, Lu Hao - who hates walking to school and often getsaride there by motorcycle - has now grown so big that his mother is unable to pick him up.Chen Yuan said: 'We have to let him be as if we don't feed him he will cry non-stop.
Posted by peter kyaw | at 11:05 PM | 1 comments
ခွေးများကာ နေရာတစ်ကာအသုံးဝင်ကာလူသားများအတွက်အလွန်အကျိူးပြုလေသည်။ သူတို့ ကားလူတွေ
အတွက်အဖော်သဟဲပြုပေးသည်...တစ်နေ့ တာလုံးလုပ်ငန်းခွင်မှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာခဲ့ သမျှ အိမ်ပြန်အ
ရောက်မှာ အမြီးနန့် ကာဝမ်းသာအဲလဲကြိုတတ်ကြသည်....အိန္ဒိယမှာဆိုလျှင်ဖြင့် သူတို့ ကြောင့် ပင်ဇတ်အ
နိမ့် အမြင့် ခွဲခြားခြင်းကိုချေဖျက်နိုင်ခဲ့ ပေပြီ.....
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရမ်နာဂါရမ်ခရိုင်၊ အေဗီဟာလီ ရွာကလေးတွင်တော့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသား ကာနာတကသား
တွေဟာ ဆရီနာရီဒိုးဗီရက်ပါ အမည်ရှိ ခွေးနတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြပါတယ်...
အဆိုပါခွေးနတ်ဘုရားကျောင်းဟာ ထိုရွာကလေးရဲ့ အဓိကကိုးကွယ်ရာ ဆရီဗီရာမတ်စတီ ကမ်ပမ်မာ နတ်
ဘုရားကျောင်းရဲ့ နဘေးကပ်လျှက်တည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ဒေသခံရွာသားများကတော့ အဆိုပါခွေးနတ်ဘုရား
ဟာ ရွာစောင့် နတ်ဘုရားကြီးရဲ့ လက်ထောက်နတ်ဘုရားငယ်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုယုံကြည်နေကြပါတယ်....
ခွေးနတ်ဘုရားကိုယုံကြည်သူ ရာဂျေ့ ရှ် ကတော့ လူတွေကဒီကိုလာပြီးဆုတောင်းကြတာပါပဲ...ဆုတောင်း
ပြည်ကြတော့ လည်းတစ်ခါထပ်ပြန်လာပြီးတိုးလို့ ပူဇော်ကြပါတယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ခွေးနတ်ဘုရား (ဘုရားကျောင်းစောင့် ရှောက်သူက အာရုံခံ၊ ပူးဝင်ပြောခြင်းဖြင့်) ဟာရှေးရေးမျှော်တွေးလို့ 
ဗေဒင်မေးချင်သူများအတွက် ဟောပြောပေးရုံတင်သာမက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကပ်ဘေးဆိုးများကိုလည်းကြို
တင်နမိတ်ဖတ်သတိပေးတတ်ပါသေးတယ်...ထို့ အပြင်မွေးဖွားလာသည့် ကလေးငယ်များအတွက်အမည်
ခွေးနတ်ဘုရားကို ယုံကြည်မှုကိုဝပ်တွားသက်သေပြသည့် အနေဖြင့် ရွာသားအများစုကတော့ ၎င်းတို့ ရဲ့ ရင်
သွေး၊ ကလေးငယ်များကို နတ်ဘုရားရဲ့ အမည်ပေးတတ်ကြပါသေးတယ်...
ကလေးငယ်ဟာယောကျာင်္းလေးဖြစ်လျှင် ဗီရမ်နာ၊ မိန်းကလေးဆိုလျှင်တော့ ဗီရမ်မာ လို့ အမည်ပေးခေါ်
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကို ဒီနာမည်နှစ်ခုဟာ အများဆုံးပေးခဲ့ ကြတဲ့ အမည်တွေပဲဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်...
ထိုထက်ပိုသည့် အချက်အနေနှင့် ထိုခွေးနတ်ဘုရားကြောင့် ပင် ( ခွေးကိုယုတ်ညံ့ သည်ဟု အယူအစွဲကြီး
မားသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ) ထိုကျေးရွာလေး၌ဇတ်အနိမ့် အမြင့် ခွဲခြားသည့် စနစ်ပျောက်ဆုံးပျက်ပြယ်ခဲ့ ရပါ
ခွေးနတ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ စောင့် ရှောက်နေထိုင်သူဘုန်းကြီးကတော့ ဇတ်နိမ့် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်....အမှန်ဆို
လျှင်တော့ထိုဇတ်နိမ့် များကို အိန္ဒိယမှာဝိုင်းဝန်းပစ်ပယ်ရှောင်ကြဉ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်...
ယခုတော့ ဇတ်နိမ့် တစ်ဦးက နတ်ဘုရားရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်၊တမန်တော်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာကိုက ဇတ်နိမ့် ၊
ဇတ်မြင့် ခွဲခြားသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ခွေးနတ်ဘုရားရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမည်မျှအရေးပါသည်ကို ညွှန်းဆိုပြနေ
အသိဥာဏ်ဗဟုသုတမပြည့် စုံကြတော့ လည်းဒီလိုပါပဲ ...ထင်ရာမြင်ရာစွဲလမ်းယုံကြည်တတ်ကြတာလူ့ သ
ရွှေပြည်ကြီးမှာလည်း မြင်းကိုကိုးကွယ်တဲ့ မြင်းဖြူရှင်နတ်ဆိုတာရှိသေးတာပဲမဟုတ်လား...
နတ်မြင်းစားဖို့ ဆိုပြီးမြေစာမြက်တွေငွေကုန်ခံပြီးဝယ်ကာစင်ပေါ်တင်တတ်ကြသေးတာပဲ...အမှန်တော့ ဒီ
မြင်းနဲ့ ဒီနတ် ထိုစဉ်ကသေခဲ့ ကြပြီးနောက်လည်းဆက်ပြီးမခွဲမခွာအတူရှိနေမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်
ပဲဆိုတာ ( လူကသေလို့ နတ်ဖြစ်တာတော့ ထားပါတော့ မြင်းကသေတော့မြင်းနတ်ဖြစ်ပြီးမြက်တွေဆက်စား
တယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတာကြီးက ရယ်စရာအလွန်ကောင်းလှပါတယ်...)ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို အတန်အ
သင့် လေ့ လာမှတ်သားနာယူဖူးသူတိုင်းအနည်းငယ်စဉ်းစားကြည့် ရုံမျှဖြင့့်သိနိုင်ပါတယ်...
The dog God, in addition to serving asasort of local fortune teller, seemingly warning the villagers of bad events to come, as proven to beabit of inspiration for the naming of newborns.
In an attempt to prove their devotion to the dog God, many families have taken to naming their children after the dog God. If it’saboy, the child is named Veerappa or Veeranna; girls are named Veeramma. Give itafew years and it’ll become the new “Steve” or “Jennifer.”
Posted by peter kyaw | at 1:54 AM |3comments
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အနုမြူရောင်ခြည်ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုအတွက် စိုးရိမ်ကြောင့် ကျမှုများဖြစ်ကာ လူအများအထိတ်
တစ်လန့် ဖြင့် ဆားများ အလုအယက်ဝယ်ယူခဲ့ မှုအပေါ် အခွင့် ယူအမြတ်ထုတ်ချင်စိတ်ဖြင့် ဆား ၆.၅ တန်
၀ယ်ယူစုဆောင်းသိုလှောင်ခဲ့ သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ိသမလောဘသားတစ်ယောက်ဟာ ယခုအခါမှာတော့ 
ထိုဆားပုံကြီးနှင့် ဒုက္ခရောက်နေခဲ့ ပါတယ်...
ဂို ဟုအမည်ရှိထိုအမျိူးသားဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူဘေပြည်နယ်၊ ၀ူဟန်းမြို့ တွင် လွန်ခဲ့ သည့် ရက်သတ္တပါတ်
များက အိုင်အိုဒင်းဆားသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော နာမကျန်းဖြစ်မှုကို တားဆီးကာကွယ်
နိုင်သည်ဟူသော ကောလဟလများဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီးနောက် ဆားများအမြောက်အများဝယ်ယူသိုလှောင်ခဲ့ တာ
အဆိုပါကောလဟလကြောင့် ဆားဈေးများအဆမတန်တက်သွားခဲ့ ရပြီး အနည်းဆုံးခြောက်လခန့် ဆားများ
ပြတ်လပ်လိမ့် မည်ဟူသောခန့် မှန်းချက်ကို ( ယုံကြည် ) အခြေခံကာ ဂို တစ်ယောက်ဆားအိတ်ကြီးပေါင်း
၂၆၀ ကိုဝယ်ယူကာ ထရပ်ကားသုံးစီဖြင့်တိုက်ကာ ၎င်း၏တိုက်ခန်းသို့ သယ်ယူသိုလှောင်ခဲ့ ပါတယ်...
လောဘငယ်တော့ လယ်လောက်ရ...လောဘကြီးတော့ ...!!!!
ထို့ နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ တရုတ်အစိုးရကစိုးရိမ်ပူပန်နေသည့် ပြည်သူများကို ငလျင်ဒါဏ်
ခံရကာ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ ရသည့်ဂျပန်ပြည်မှ ညူကလီးယားဓါတ်အားပေးစက်ရုံမှ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုများ တ
ရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ ကာအထိတ်တလန့် ဖြင့် ဆားများ အလုအ
အယက်ဝယ်ယူခြင်းမပြု၇န်ပန်ကြားခဲ့ ပြီးနောက်ဆားဈေးများ တစ်ဟုန်ထိုးပြန်ကျသွားခဲ့ ပါတယ်...
ယခုအခါမှာတော့ ဂို ဟာ အရင်းငွေ၂၇၀၀၀ ယွမ် ကုန်ကျခဲ့ ပြီး၎င်းရဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ဝက်ပြည့် လုနီးပါး ဆား
ဂို အနေဖြင့် တရားဝင်ဝယ်ယူထားသည့် အထောက်အထားမရှိသည့် အတွက် ယခုအခါဆားများပြန်ရောင်း
လျှင်လည်း ဥပဒေနှင့် ဆန့် ကျင်တာဖြစ်မှာမို့ ရောင်းလို့ မရနိုင်တော့ သလို အစိုးရမှ ဆားများသယ်ယူပို့ 
ဆောင်ခြင်းအား တင်းကျပ်စွာတားဆီးထိန်းချူပ်ထားသည်မို့ ထိုဆားများကိုလည်း တစ်ခြားပြည်နယ်၊ အရပ်
ဒေသသို့ မပို့ ဆောင်တော့ ပါဘူး....
ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာပြီးရောစိတ်နှင့် ရွှေပြည်ကြီးကနေ ဆားများအလုအယက်ဝယ်ယူသိုလှောင်ပြီး
ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ ဆီပို့ မယ်ဆိုပြီး လောဘတက်ခဲ့ တဲ့ ရွှေပြည်ကြီးက သူဌေးဖြစ်နောက်ကျသူတစ်ချိူ့ လည်း
ဆားပုံကြီးများဘေးထိုင်ကာ ဘ၀ပျက်မတတ်ဖြစ်ခဲ့ ကြ၇တယ်လို့ အရပ်သတင်းများကဆိုပါသေးတယ်...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခြေအနေအရလိုအပ်လာတဲ့ အချိန်မှာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကတော့ 
A Chinese man who bought 6.5 tonnes of salt, hoping to profit from panic buying spurred by fears of radiation from Japan, is now stuck it. The man, surnamed Guo, bought the salt in Wuhan, the capital of Hubei province, when rumours spread across China last week that the iodine in salt could help ward off radiation sickness.
Salt prices jumped on the rumours, and, acting onatip that there would beasupply shortage lasting at least six months, Guo bough 260 bags of salt, which he took back to his apartment in three trucks.
Guo is now stuck with the salt, which takes up more than half his apartment and had cost him 27,000 yuan (£2,550) to buy and transport. Guo can't resell the goods, because he has no receipt and also because he was told it was illegal to do so. He also can't take it to another province, as the government strictly controls salt transport.
Posted by peter kyaw | at 12:47 AM | 1 comments
Labels: news: china daily
Father who 'died' for 45 minutes brought back to life after being frozen for two days
လေးဆယ့် ငါးမိနစ်အကြာ အသက်ရှူရပ်၊ နှလုံးခုန်ရပ်သွားခဲ့ သူ
၄၅ မိနစ်ကြာ အသက်ရှူရပ်၊နှလုံးခုန်ရပ်သွားခဲ့ ကာသေဆုံးခဲ့ သည့် အမျိူးသားတစ်ဦးသည်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်
အား နှစ်ရက်ခွဲကြအောင် အေးခဲစေရန်စီမံခဲ့ ပြီးနောက် သေခြင်းမှပြန်လည်ရှင်သန်ခဲ့ သည် ( သေရွာပြန် )
အဆောက်အဦခေါင်မိုးများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် မက်ဖောက်စ် အနေဖြင့် လေး
ဆယ့် ငါးမိနစ်ကြာ နှလုံးခုန်ရပ်သွားခဲ့ သဖြင့် ဦးနှောက်အားအပြင်းအထန်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားလိမ့် မည်ဟု
ဆရာဝန်များက ခန့် မှန်းထားခဲ့ ကြပါတယ်...
သို့ သော် ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းသည့်၎င်း၏စေ့ စပ်ထားသည့် ချစ်သူ ဂျန်းဘရေစီက အရေးပေါ်နှလုံးခုန်
အသက်ကယ်ကုထုံးဖြင့် ကုသပေးခဲ့ ပြီး ဆေးရုံဝန်းထမ်းများကလည်း ၎င်းအားရေခဲဝတ်စုံ ( အအေးခန်းကဲ့ 
သို့ အအေးဓါတ်ရှိစေရန်စီမံထားသည့်ဝတ်စုံ ) ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူရှိကျအောင်ဖန်တီးပေးထားခဲ့ လို့ ဆက်
ရေခဲတိုက်အအေးခန်းနဲ့ တူသည့် ရေခဲဝတ်စုံဖြင့် နှစ်ရက်ခွဲထားခဲ့ ပြီးသတိပြန်လည်ရရှိခဲ့ သည်
ဦးသက်ပြင်း၊ သေရွာပြန်ခဲ့ ရပါတယ်...
Out cold: Mr Fox was kept in an ice suit for two andahalf days before regaining consciousness
ယခုတော့ အသက် ၄၇ နှစ်ရှိ ကလေးတစ်ယောက်ဖခင် မစ္စတာဖောက်စ် ဟာ လေးလအကြာမှာတော့ ပြန်
လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းလာပြီမို့ တွန်ဘရစ်ခ်ျ ကျောင်းမှ ၎င်းလုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်အသင့် 
မွေးရာပါနှလုံးရောဂါရှိသူ မစ္စတာဖောက်စ်က ၎င်းအနေနှင့် အလွန့် အလွန်ကံကောင်းခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ် လို့ 
" အခုတော့ နေလို့ လည်းအလွန်ကောင်းပြီး အလုပ်ဆင်းချင်လွန်းလှပါပြီ... ဆရာဝန်တွေကကျွန်တော့် ကို
တားမြစ်ထားတာတွေကတော့ ဘန်ဂီခုန်ခြင်း၊ ရေခဲပြင်စွပ်ဖားစီးခြင်း၊ ရပ်ဘီဘောလုံးကစားခြင်း စသည့် ပင်
ဂျိမ်း ဟာအရေးအကြောင်းကျယင် တစ်ကယ်တော်ပါတယ်...သူမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ တာကယုံနိုင်စရာတောင်
မရှိပါဘူး..." လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်....
သူမကိုကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ၊ သူမရဲ့ အပြုအမူတွေကိုလေးစားလွန်းလို့ မစ္စတာဖောက်စ်ဟာ အသည်းအသန်
ကုသခန်းကုတင်ပေါ်မှာပဲ သူမကိုလက်ထပ်ဖို့ ခွင့် တောင်းခဲ့ ပါတော့ တယ်...
၎င်းတို့ စုံတွဲဟာလာမယ့် နှစ်မှာ လက်ထပ်ကြတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်...
" သူကတော့ ဘယ်တုံးက လက်ထပ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ တယ်ဆိုတာ သတိမရတော့ ဘူးလို့ ဆိုပေမယ့် ကျွန်မ
ကတော့ သူ့ အသက်ပြန်ရှင်လာတာကိုပဲဝမ်းသာလှပါပြီ...." လို့ မစ္စဂျိမ်း ကဆိုပါတယ်....
သူမအနေနှင့် ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုယခုအခါ ရယ်ရယ်မောမောပြောပြနိုင်ပေမယ့် ထိုစဉ်ကတော့ တွန်ဘရစ်
အရပ်က သူမရဲ့ နေအိမ်ဧည့် ခန်းထဲမှာ ထိုစဉ်ကချစ်သူသက်တမ်းသုံးလသာရှိသေးသည့် အမျိူးသား နှလုံး
ရောဂါဖောက်နေတာတွေ့ ရတာကိုက တစ်ကယ့် ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြင်းထန်နေခဲ့ တာ
အခုတော့ နေကောင်းသွားပြီမို့ ဒီကျောင်းက မူလအလုပ်ကိုပြန်ဝင်ရတော့ မှာပါ...
Back to work: Tonbridge school in Kent, where Mr Fox works asaroofer
" ထိုစဉ်က ကျွန်မတို့ ဒီဗီဒီ ဇတ်ကားတစ်ကားကြည့် နေခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ကျွန်မက တစ်ခုခုသောက်ဖို့ သွားယူ
ခဲ့ ပြီး ပြန်လာတော့ သူ့ ဆီက ငြီးသံကြားရလို့ သူတော့ နေမကောင်းဖြစ်ပြီလို့ ထင်ခဲ့ မိပါတယ်...ပြီးလည်း
ပြီးရော သူဟာအသက်မရှူတော့ပါဘူး.....ကျွန်မက အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးကို ဖုံးဆက်ပြီး နှလုံးခုန်အ
သက်ကယ်ကုထုံးနဲ့ ကုပေးပြီး သူ့ အခြေအနေကိုထိန်းထားခဲ့ ပါတယ်... ပြီးတော့ သူ့ ကိုဆေးရုံကိုခေါ်သွား
ခဲ့ ပြီး မျှော်လင့် ချက်မရှိတော့ ဘူးလို့ ကျွန်မတို့ ကိုပြောပြပါတော့ တယ်...
သူဟာ လေးဆယ့် ငါးမိနစ်ကြအောင် အသက်မရှူနိုင်ဖြစ်ခဲ့ ရပြီး နှလုံးနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာ
၀န်တွေက သူ့ ဦးနှောက်ထဲသွေးခဲသွားတယ်လို့ ယူဆကြတယ်လို့ ပြောပြကြပါတယ်....
သူတို့ ကသူ့ ကို ရေခဲတွေဖြည့်သိပ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံတစ်ခုထဲထည့် ပြီး သူ့ ရဲ့ ကိုယ်အပူရှိန်ကို နှစ်ရက်ခွဲကြာ
အောင်လျော့ ချ၊ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ ကြပါတယ်...
သူတို့ က ဦးနှောက်သာထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ ယင်တော့ပြန်လည်ကုသလို့ ရမှာမဟုတ်ပေမယ့် အခုလိုလုပ်
တာဟာ ( ရေခဲအိပ်ထဲထည့် တာ ) ပိုမိုမဆိုးရွားစေဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်...
အဲဒီနောက်တော့ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်အပူချိန်ကိုပုံမှန်ပြန်ရောက်စေပြီး သူမျက်လုံးလည်းဖွင့် ( သတိရ ) ရောသူဟာ
သူဟာအသည်းအသန်လူနာခန်းမှာ လေးပါတ်၊ သာမန်လူနာဆောင်မှာတစ်ပါတ်နေခဲ့ ပြီး ခရစ်စမတ်အမှီ
အိမ်ကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ ပါတယ်..." လို့ သူမကပြောပြခဲ့ပါတယ်....
အသက် ၄၈ နှစ်ရှိ ကြက်ခြေနီလက်မှတ်ရ၊လူမှုဝန်ထမ်း မစ္စဘရေစီ ကတော့ ကျောင်းနေကလေးများအား
လုံး အရေးပေါ်အသက်ကယ်နှလုံးခုန်ကုထုံးအား သင်ကြားပေးဖို့ ယခုအခါတောင်းဆိုတိုက်တွန်းနေပါတော့ 
" မက် မှာက နှလုံးကြွက်သားတွေအလုပ်မလုပ်နိုင်တတ်တော့ တဲ့ ရောဂါရှိပါတယ်...အဲဒီရောဂါဟာမျိူးရိုးစဉ်
ဆက်ဖြစ်ညပီး သူ့ အစ်ကိုပေါ်လည်း အဲဒီလိုဖြစ်ပြီး သူ့ အသက်အရွယ်မှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အကယ်၍ကျွန်မသာ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ဘယ်လုိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိယင် သူ့ အခြေအနေဟာအခု
ဆို လုံးဝကြီးကိုတစ်ခြားစီဖြစ်နေမှာပါပဲ..." လို့ သူမကဆိုလိုက်ပါတယ်...
အရေးပေါ်နှလုံးခုန်အသက်ကယ်ကုထုံး ( CPR ) လေးလည်းတတ်ထားသင့် ပါတယ်...
ကိုပီတာလည်း ရှေးဦးသူနာပြုအခြေခံသင်တန်းတက်တာ အကြိမ်ကြိမ်ရှိပေမယ့် ကိုယ့် ရှေ့ ဘယ်သူမှနှလုံး
ခုန်မရပ်၊ အသက်ရှူမရပ်တာနဲ့ မကူညီခဲ့ ဖူးလို့ မေ့ တေ့ တေ့ တောင်ဖြစ်နေပါပြီ...
တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာများကတော့ အံ့ မခန်းပါပဲ...သေသူကိုတောင်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ 
ရွှေပြည်ကြီးမှာလည်း နှလုံးခုန်ရပ်သွားယင်၊ အသက်မရှူတော့ ဘူးဆိုယင် ရေခဲအိတ်တော့မဟုတ်ဘူး၊ ရေခဲ
တိုက်ဆီတစ်ခါတည်းတန်းပို့ ပြီး သုံးရက်အကြာမှတော့ အကောင်းပကတိအတိုင်းမီးသင်္ဂြိုလ်စက်ထဲထည့် 
A father who 'died' for 45 minutes was brought back from the dead after his body was frozen for two-and-a-half days.
Doctors feared roofer Matt Fox would be left seriously brain damaged after his heart stopped beating for three-quarters-of-an-hour.
But the actions of his quick-witted fiancee Jane Bracey, who gave him cardiopulmonary resuscitation (CPR), and hospital staff who placed him in an ice suit to cool his body down, kept him alive.
Now, four months later, the 47-year-old father-of-one is fighting fit and ready to return to his job asaroofer at Tonbridge School.
Fox, who hasahereditary heart condition, said: 'I know I was very, very lucky.
'I feel really good now and can't wait to get back to work. I'm really looking forward to it.'
'The only things I'm not allowed to do are bungee jumping, tobogganing or rugby - anything which could cause impact.
'Jane was amazing when it happened, I still can't believe it.'
She was so amazing, in fact, that Fox ended up proposing to her from his intensive care unit bed. The couple are due to marry next year.
Miss Bracey said: 'He says he doesn't remember doing it (proposing). I'm just glad to have him back.'
Although Miss Bracey laughed about the incident, circumstances were infinitely more serious when she walked in to her sitting room at home in Tonbridge, Kent, to see her then partner of three months having what she thought wasaheart attack.
She said: 'We were watchingaDVD and I went to getadrink. I came back and heard strange noises and thought he was being ill. Then he stopped breathing.
'I called 999 and gave CPR and tried to stabilise him. He was taken to hospital (Kent and Sussex in Tunbridge Wells) and they told us there may be no hope.
'He hadn't breathed properly for 45 minutes and the heart and neuro-surgeons said they thought he'd sustained major brain damage.
'They put him intoasuit filled with ice cold fluid and reduced his body temperature for two-and-a-half days.
'They said if there was going to be any brain damage then it wouldn't repair it, but wouldn't make it worse.
'His temperature was brought back up and when he opened his eyes he was fine.
'He spent four weeks in intensive care, one week onanormal ward, and came home in time for Christmas.'
Miss Bracey, 48,acarer trained in first aid, is now calling on all school children to undergo CPR training.
She said: 'It's so important. Matt had cardiomyothapy which is where the muscle stops working.
'It was hereditary as his brother Paul died of the same condition at the same age.
'If I hadn't known how to do it, then we would be inavery different situation right now.'
Posted by peter kyaw | at 11:30 PM |0comments
Guinness world record with his incredible bendy feet
ကိုယ်မလှည့် ပဲခြေထောက်ချည်းသာနောက်ပြန်လှည့်လျှောက်နိုင်သည့် လူထူးဆန်း...
မိုးဆက်လန်ဟမ် ကတော့ ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်းထဲကို အသွင်မတူ၊ တစ်မူထူးတဲ့ ဆန်းသစ်မှုပုံစံနဲ့ ဝင်
" ခြေထောက်နောက်ပြန်လူသား " သို့ မဟုတ် " တွန့် လိမ်လူသား " လို့ လူသိများသည့် မီချီဂန်အရပ်မှ အ
သက် ၄၉ နှစ်ရှိအမျိူးသားဟာ သူ့ ရဲ့ ခြေထောက်တွေကို ( အရှေ့ မှအနောက် သို့ ) ၁၂၀ ဒီဂရီတိုင်အောင်
လှည့် နိုင်တာမို့ ဂင်းနက်စ်ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်းမှာ နေရာတစ်ခုရနိုင်လိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်...
သူ့ အနေနှင့် ( လူကရှေ့ ဖက်လှည့်ကာ ) ခြေထောက်များနောက်ပြန်လှည့် ပြီး မီတာ ၂၀ ( ၆၅ ပေ ) အထိ
အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ လျှောက်ပြီးတော့ လည်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါသေးတယ်...
ခက်ခဲပင်ပမ်းလှမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေပေမယ့် ထိုကဲ့ သို့ စံချိန်မျိူးယခင်ကမကြိုးပမ်းခဲ့ တာမို့ 
မစ္စတာ လန်ဟမ်ကတောတ့ သူ့ အနေနှင့် ယုံကြည်မှုအပြည်ရှိနေပါတယ်...
ဇဗ္ဗူမှာ သူလိုလူရှိနိုင်သေးလားကွယ်...လာမည့် ရက်သတ္တပါတ်မှာအီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့ မှာ
" ကျွန်တော့ ရဲ့ ခြေချောင်းတွေကို နောက်ပြန်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပေမယ့် အခုလိုစံချိန်တင်မှတ်တမ်းအ
အတွက်တော့၁၂၀ ဒီဂရီပြည့်အောင် လုပ်ရပါလိမ့် မယ်....
အပြင်ပန်းအမြင်အနေနှင့် နာကျင်ခံခက်ဖြစ်လိမ့် မည်ဟုထင်ရသော်လည်း ၎င်းရဲ့ ပျော့ ပြောင်းခွေခေါက်နိုင်
သည့် ခြေထောက်များကြောင့် နာကျင်မှုမဖြစ်ရပဲ အဲဒီလိုခြေထောက်ရှေ့ နောက်ပြောင်းပြန်လုပ်နိုင်တာကို
ပဲ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိပါတယ်လို့ မစ္စတာလန်ဟမ် ကဆိုပါတယ်...
" ကျွန်တော်ထိုင်နေတာတောင်မှ ခြေထောက်တွေကို နောက်လှည့် ထားတာမျိူးတော်တော်များများလုပ်
လေ့ ရှိပါတယ်...ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ အဲဒီလိုလုပ်ထားတာကခြေထောက်တွေကိုပိုပြီးအညောင်းပြေ
စေလို့ ပါပဲ..." လို့ သူကဆိုပါတယ်...
မစ္စတာလန်ဟမ်က သူ့ ရဲ့ အများနှင့် မတူ၊တစ်မူထူးခြားတဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို သူ့ အသက် ၁၄ နှစ်သားအ
ရွယ်၊ အထက်တန်းကျောင်း အားကစားသင်တန်းတစ်ခုရဲ့ မတော်တစ်ဆဖြစ်မှုမှာ တွေ့ မြင်သိရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါ
ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့် တွယ်တက်နေခဲ့စဉ်သူဟာ လက်လွတ်ပြီးအမြင့် ၁၈ ပေအထက်မှခြေကားယားလက်
ကားယားနဲ့ ပြုတ်ကျခဲ့ ပါတယ်...
" အရိုးအဆစ်တွေများကျိူးကုန်ပြီလားလို့ တွေးမိပါတယ်...ဒါပေမယ့် ဗျာ...ကျွန်တော်က အကောင်းပကတိ
အတိုင်းပြန်ထလာနိုင်ခဲ့ ပါတယ်..." လို့ သူကဆိုပါတယ်...
ထိုစဉ်ကတည်းကစပြီး မစ္စတာလန်ဟမ် ဟာသူ့ ရဲ့ အစွမ်းအစကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချခဲ့ ပါတော့ 
အထက်တန်းကျောင်းမှာဆို သူဟာနောက်ပြန်လျှောက်လေ့ ရှိပြီး တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ရောက်တော့သူ့ ရဲ့ 
နောက်ပြန်လှည့်ထားတတ်တဲ့ ခြေထောက်များနှင့် အံကိုက်ဖြစ်အောင်အ၀တ်အစားတွေကိုရှေ့ နောက်လှည့်
စိတ်မကောင်းစရာကတော့ မစ္စတာလန်ဟမ်ရဲ့ သား အသက် ၁၇ နှစ်ရှိ ထရေးကတော့ သူ့ ဖခင်ရဲ့ ခြေရာ
ဖခင်ဖြစ်သူလို သူ့ ရဲ့ ခြေထောက်ကိုအပြည့် အ၀မလှည့်နိုင်သလို ထိုကဲ့ သို့ အနည်းငယ်လှည့် တာတောင်မှ
" ကျွန်တော်ကအနားယူပြီး သူ့ ကို ( ကျွန်တော့ နေရာအစားထိုး ) ဆက်လုပ်ခိုင်းပြီး သူ့ အတွက်စီစဉ်သူဖြစ်
ချင်တာ အခုတော့ မရတော့ ဘူးပေါ့ ဗျာ..." လို့ မစ္စတာလန်ဟမ် ကဆိုပါတယ်...
မစ္စတာလန်ဟမ်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ ကြသည့် ဆရာဝန်များကတော့ သူ့ ကိုမွေးကတည်းကပင် အသား
တစ်ရှူးအပိုများနှင့် ခြေဆစ်လက်ဆစ်များတွင် အရွတ်အပိုများပါဝင်ခဲ့တာမို့ သူ့ ရဲ့ တင်ပါးဆုံရိုး၊ ဒူးများ၊ ခြေ
မျက်စေ့ များအား အထူးတစ်လည်ပျော့ ပျောင်းခွေခေါက်နိုင်စေတာဖြစ်ပါတယ်....
နောက်လှည့် ထားသည့် ခြေထောက်များနှင့် လိုက်အောင် အ၀တ်အစားများပါ ရှေ့ နောက်ပြောင်းပြန်
သူတို့ မိသားစုမှာ သားဖြစ်သူ ထရေးကလွဲလို့ ကျန်သည့် မည်သူမျှသူ့ ကဲ့ သို့ အဖြစ်ဆန်းမရှိခဲ့ ပါဘူး...
သူဟာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များဖြစ်သည့် " ပွင့် ပွင့် လင်းလင်းရိုက်ကူးခြင်း " " ရစ်ပလေရဲ့ ယုံချင်ယုံ၊ မ
ယုံချင်နေ " " အမေရိကန်၏အရယ်ရဆုံးအိမ်တွင်းဖြစ်ဗီဒီယို " " ဂျင်မီကင်မဲလ် တိုက်ရိုက်အစီအစဉ် " တို့ အ
ပြင် ဒစ္စကာဗာရီရုပ်သံလိုင်း၏ " ဆေးပညာဆိုင်ရာအံ့ သြဖွယ်ရာ "စသည့် အစီအစဉ်များမှာ ပါဝင်ခဲ့ ရပြီး
နောက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ညဘက်များရုတ်တစ်ရက်အဲဒီလိုနောက်ပြန်ဝတ်စားပြီးလျှောက်လာတာတွေ့ လို့ ကတော့အသည်းငယ်တဲ့ 
Posted by peter kyaw | at 4:26 AM |2comments
လူ ၂သိန်းပါဝင်ဆင်နွှဲသည့်တရုတ်နိုင်ငံ၊နယ်မြို့ လေးတစ်ခုက တံတားဖြတ်လျှောက်ဆုတောင်းပွဲ...
ဒီအချိန်ဆိုလျှင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဒေသက နယ်မြို့ လေးတစ်ခုမှာတည်ရှိသည့် တိုင်
ပင်း တံတားဆီသို့ သိန်းနှင့် ချီသည့် လူအုပ်ကြီးဟာ ဒေသဆိုင်ရာတရုတ်ရိုးရာဓလေ့ ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်သည့် 
တံတားနင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် သွားရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွမ်ပြည်နယ်၊ ကျူးရွှေမြို့ ကလေးမှာကျင်းပသည့် အဆိုပါပွဲတော်သို့ ဒေသခံပြည်သူများ တံ
တားကလေးကိုဖြတ်လျှောက်ကာ နွေဦးရာသီ တစ္ဆေကြီးပွဲတော်တွင် မိသားစုများအတွက် ဆုမွန်ကောင်းများ
တောင်းကြသည့် အစဉ်အလာဓလေ့ လည်းဖြစ်ပါတယ်....
" ချွမ်းရှေ " သို့ မဟုတ် နွေဦးရာသီပွဲတော် လို့ လူသိများသည့် အဆိုပါပွဲတော်ရက်အတွင်း ဒေသခံပြည်သူ
များဟာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ခြင်း၊ ကျန်းမာစေခြင်းစသည့် ကောင်းကျိူးချမ်းသာများရရှိစေဖို့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအ
လူပေါင်း ၂ သိန်းကျော်ခန့် ဟာ ရှေးဟောင်း တိုင်ပင်း တံတားပေါ်မှာစုရုံးဖြတ်လျှောက်ကြပြီး ကံကောင်းခြင်း
တွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးစေဖို့ တံတားပေါ်မှ အောက်ရှိချောင်းရေပြင်ထဲသို့ အ၀တ်အစားဟောင်းများ ငွေအ
ကြွေစေ့ များပစ်ချကာ ဆုတောင်းလေ့ ရှိကြပါတယ်...
ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ၊ လန်းဖြာကာ ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆောင်ကြဉ်းရောက်ရှိလာစေဖို့ 
စီချွမ်ပြည်နယ်၊ တိုင်ပင်းတံတားကို နွေဦးတစ္ဆေကြီးပွဲမှာ ဆုတောင်းကြပါစို့ ...
၂ သိန်းလောက်ရှိတဲ့ လူအုပ်ကြီးက တံတားပေါ်ကနေ အ၀တ်ဟောင်းတွေ၊ ငွေအကြွေစေ့ တွေ
ပစ်ချပြီး ဆုတောင်းကြတယ်....( ဘယ်လောက်များ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းလိုက်လေမလဲပဲ...)
ဒီလောက်များတဲ့ လူအုပ်ကြီးက မြစ်ကလေးထဲ အမှိုက်တွေပစ်ထည့် ကြတော့ .....
တရုတ်ပြည်ငလျင်ဒါဏ်ကြောင့် သုံးနှစ်ကြာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ ပြီးမှ တံတားဖြတ်လျှောက်ဆုတောင်း
ပွဲအတွက် ပြန်လည်ဖွင့် လှစ်ခွင့် ပြုပေးခဲ့ ပါတယ်...
ကလေးတွေကိုလည်း ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ပါတယ်...
ချွန်းရှေ တံတားကို လွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ၀မ်ချွမ်ဒေသ တွင်လှုပ်ခဲ့ သည့် ၈.၀ ပြင်းအားရှိမြေငလျင်
ဒါဏ်ကြောင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ပိတ်ထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ယခုတော့သုံးနှစ်အကြာပြင်ဆင်အပြီးမှာ ပြန်လည်ဖွင့် လှစ်ပေးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..
ဒေသခံတွေဟာ အအေးဒါဏ်ကိုအံတုပြီး ကလေးငယ်များကိုပါ ခေါ်ဆောင်လာကြကာ တံတားပေါ်မှ ငွေအ
ကြွေစေ့ များပစ်ချနိုင်မည့် အခွင့် ကိုစု၇ုံးစောင့် ဆိုင်းနေခဲ့ ကြပါတယ်....
တစ်ချိူ့ သောသူများက တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ပြီးအလှပြလျှောက်လှမ်းခဲ့ကြပြီး တစ်ချိူ့ ကတော့ 
တံတားနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိသစ်ပင်များကို အရောင်စုံအလံငယ်များ၊ တရုတ်စက္ကူများဖြင့် တန်ဆာဆင်ခဲ့ ကြ
၎င်းတို့ အနေဖြင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်လာဘ်ကောင်းဝင်စေဖို့ အ၀တ်အထည်များနှင့် ငွေအကြွေများပစ်ချဆု
တောင်းကြတာဖြစ်ပေမယ့် မြစ်ရေပြင်မှာတော့ အမှိုက်တွေနဲ့ ပြည့် သွားခဲ့ ရပါတော့ တယ်....
သဘာဝရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ ရေတွေဗုံးပေါလအောသုံးကာပက်သွန်ပြီး အမှိုက်တွေစည်းမဲ့ ကမ်းပဲပစ်ကြလေ့ ရှိ
တဲ့ မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲကိုလည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့် သင့် ပါပြီ...
ဒီလိုပြောလို့ ရေလုံးဝမပက်ရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး...အပျော်လည်းရှိစေ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုလည်းဖြစ်
စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများကို ပညာရှင်များဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာဖို့ ပါပဲ...
Posted by peter kyaw | at 11:04 PM |2comments
အသံဖိုင်နားထောင်လို့ မရသူများ ကိုချမ်းလင်းနေ ဘလော့ ဂ်တွင်သွားရောက်နားထောင်နိုင်ပါတယ်...
ဆရာချစ်ဦးညို - အမျိုးသားရေးမို့ ကြိုးပမ်းကြပါတို့ ဗမာ
ဆရာချစ်ဦးညိုက ဤသို့ ဟော၍....
ဆရာအော်ပီကျယ်မှ ဤသို့ ပြောခဲ့ ကြသည်....
အခမ်းအနားမှူးများရဲ့ မိတ်ဆက်ပြောကြား သူတို့ စကား....
( master of ceremony ) အမ်စီမမ... သိပ်ကိုလှ....
ဆရာနှစ်ဦး ဟောပြောပွဲခန်းမရှိရာ အဆောက်အဦသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ ကြစဉ်....
စာချစ်သူများအား အမှတ်တရလက်မှတ်ထိုးပေးရန်အဆင်သင့် ဖြစ်နေသည့် ဆရာချစ်ဦးညို....
"ဆရာချစ်....ဟောရပြောရဦးမှာနော်..." ဆိုပြီးသတိပေးနေတဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ်...
ဆရာချစ်ဦးညိုအား အဖြူရောင်သံစဉ်မှတွေ့ ဆုံမေးမြန်းစဉ်
ဆရာအော်ပီကျယ်ကိုလည်း ဤသို့ ဤနှယ် မေးခဲ့ ပါသေးတယ်...
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေသည့် "ဆရာပီ" ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေသည့် "ကိုပီ" မှဤသို့ မှတ်တမ်းတင်
အခမ်းအနားကို မြနန္ဒာသီချင်းဖြင့်အဆုံးသတ်တော့ ဆရာချစ်ဦးညိုပါ ၀င်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ ....
ဒူဘိုင်းစာပေ၀ါသနာရှင်၊ ဘလော့ ဂ်ဂါများနှင့် စာရေးဆရာများ မိတ်ဆက်နေ့ လည်စာစားပွဲ....
အပျော်အပြုံးတွေကိုယ်စီနဲ့ ...အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ ရတယ်ပေါ့ .....
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးမိုးမျှော်တိုက် Burj Khalifa ပေါ်က ရွှေချောင်းထုတ်စက်နဲ့ အမှတ်တရဆရာချစ်ဦးညို
ရွှေချောင်း ၂ ချောင်းပဲဝယ်လိုက်ပါတယ်လို့ များပြောနေလေသလားပဲ...
ဆရာပီကလည်း အားကျမခံ အဘူဒါဘီ ပဲလေ့ စ်ဟိုတယ်မှာ ရွှေချောင်းတွေဝယ်ခဲ့လေသလားပဲ....
အာရပ်ရိုးရာခေါင်းပေါင်းဝတ်စုံများဖြင့် ( Sheik ) " ရှိတ်စော်ဘွား " ဖြစ်သွားသည့်ဆရာနှစ်ဦး...
ဘတ်တန်ထ ချစ်ဦးညိုနှင့် ဘတ်တန်ထ အော်ပီကျယ်တို့ အား အလှဆင်သစ်သီးအဟာရလှူနေစဉ်...
ဆရာချစ်ကတော့ ချမ်းလို့ ဆိုပြီး ကိုပီတာရဲ့ အင်္ကျီလက်ရှည်နဲ့ ရင်ငွေ့ လှုံသွားခဲ့ လေရဲ့ ...
( အပျော်သဘောမို့ ခွင့် လွှတ်ပါ ဆရာတို့ ခင်ဗျား...)
Posted by peter kyaw | at 3:59 AM |2comments
Labels: ဓါတ်ပုံ၊ အသံဖိုင် သတင်း
၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်၊ ကြည်နူးချမ်းမြေ့ ၊ လွမ်းဆွတ်မိပါသည်...အို...အမိမြန်မာပြည်...
ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမြို့ တွင်ကျင်းပခဲ့ သည့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲကြီးကား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ၊ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ လေပြီ....
နိုင်ငံကျော် ( အမှန်တော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိမြန်မာ့ လူမှုအသိုင်းအ၀န်းတွင်ပါကျော်ကြားသည့် ) စာရေးဆရာ၊
စွယ်စုံအနုပညာရှင် ဆရာချစ်ဦးညို နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် မြင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင်ပညာသင်ကြားတတ်
မြောက်ခဲ့ သည့် ၊ သရော်စာကာတွန်းများဖြင့်ခေတ်အမြင်၊ ခေတ်အသွင်ကို ပီပြင်စွာထင်ဟပ်အောင် သရုပ်
ဖော်နိုင်စွမ်းရှိသည့်အင်ဂျင်နီယာ၊ ကာတွန်းဆရာ ဆရာအော်ပီကျယ်တို့ ၏ အမိနိုင်ငံ၊ လူမျိူး၊ ဘာသာ၊ စာ
ပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်စေရေးအတွက် စေတနာအားကြီးစွာဖြင့်ဟောပြောသွားခဲ့ သည်များကား တန်ဖိုးရှိ
အနုပညာပါရမီ၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာဗဟုသုတ ပြည့် စုံကြွယ်ဝကြသည့် ဆရာများပေမို့သုတ၊ရသနှစ်
နှစ်မျိူးစလုံးစုံအောင် ရောယှက်ဖလှယ် ဟောပြောသွားခဲ့ ကြသည်မို့ စိတ်ဓါတ်ရွှင်လန်းတက်ကြွခဲ့ ရသလို အ
အမိမြန်မာပြည်နှင့် ဝေးကွာကာ ရေခြားမြေခြား၊ လူမျိူးဓလေ့ ခြားများအကြားတွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြရ
သည့် သာသနာရေး၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လူအများလေးစားချစ်ခင်ကြသည့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြား
သည့် စာပေအနုပညာရှင်များ မကြာခဏလာရောက်လေ့ မရှိသည့် အတွက် မြန်မာဧည့် သည်ငတ်နေကြ
သည့် ဒူဘိုင်း၊ အဘူဒါဘီအပါအ၀င် ယူအေအီးနိုင်ငံရောက် မြန်မာမျိူးချစ်စိတ်ရှိသူ မြန်မာများအတွက်ကား
စာပေဟောပြောပွဲအတွက် စာရေးဆရာများရောက်ရှိခဲ့ ခြင်းက ဆုလာဘ်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ ရသည်မို့ ထိုပွဲ
ကြီးဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ကန္တာရ၀ဿ လူမှုရှေ့ ဆောင်အသင်းနှင့် ၀ိုင်း
၀န်းပံ့ ပိုးကူညီပေးကြသည့် သူများအား ကျေးဇူးတင်ထိုက်လှပေသည်...
တစ်ဦးချင်းစီမှ ခွင့် ပြုချက်သီးခြားမတောင်းနိုင်သည့် အတွက် တောင်းပန်ပါသည်...
ယူအေအီးနှင့် ဒူဘိုင်းတွင် တစ်ခုတည်းသောမြန်မာစားသောက်ဆိုင်ရှေ့ အမှတ်တရ...
ဟောပြောပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးဆောင်စီစဉ်၊၀ိုင်းဝန်းပံ့ ပိုးကူညီသူများနှင့် ဆရာနှစ်ဦးအမှတ်တရ...
Posted by peter kyaw | at 1:45 AM |4comments
ပထမဆုံးအကြိမ် ယူအေအီး စာပေဟောပြောပွဲ
မနက်ဖြန် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ယူအေအီးနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ပထမဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲလေးအတွက် ကျွန်မတို့ ကန္တာရ ဝဿလူမှုရှေ့ဆောင်အသင်းလေးရဲ့ ပွဲစီစဉ်မှု အခြေအနေလေးကို သတင်းပေးရင်း ယူအေအီးရောက်မြန်မာများ အတွက် ထပ်မံအသိပေး နှိုးဆော်ပါရစေ။
စာပေဟောပြောပွဲမှာ အဖိုးတန်တဲ့ စာစကားပေစကားများကို ချီးမြှင့်ပေးမယ့် ဆရာ ချစ်ဦးညိုနဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ်တို့ဟာ ယူအေအီးနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းမြို့ကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကန္တာရ ဝဿလူမှုရှေ့ဆောင် အသင်းအနေနဲ့လဲ ပထမဆုံးအကြိမ်စာပေဟောပြောပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအ
တွက် လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုများကို တာဝန်ခွဲဝေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။
မြို့(၇) မြို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တာမို့ လက်မှတ်ဝယ်ယူဖို့ အလှမ်းဝေးတဲ့ အခြားမြို့များမှ စာချစ်သူမြန်မာ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပမယ့် Al Noor Training Centre မှာပွဲမစတင်ခင် လက်မှတ်များကို ဝယ်ယူကာတက်ရောက်အားပေးနိုင်ပါတယ်။
စာပေဟောပြောပွဲလာ မြန်မာများအနေနဲ့ ဆရာချစ်ဦးညိုရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်များနဲ့ ယူအေအီးရောက် စာရေးဆရာ ဧကံဖြိုးရေးသားတဲ့ စာအုပ်များ၊ ယူအေအီးဘလော့ဂါ ကိုချမ်းလင်းနေ မေတ္တာဖြင့် စီစဉ်ပေး
ထားသည့် ကွန်ယက်ပေါ်မှစာပေဟောပြောပွဲများ အမ်ပီသရီးစီဒီ အခွေများကို အားပေးဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ကန္တာ
ရဝဿလူမှုရှေ့ဆောင်အသင်းရဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ် ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေမှာ ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ကြပါတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲလေး ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကန္တာရဝဿ လူမှုရှေ့ဆောင် အသင်းနဲ့အတူ ခေတ္တယူအေအီးရောက် ဘလော့ဂါများဖြစ်တဲ့ ကိုချမ်းလင်းနေ ကိုပီတာ ကိုဟန် ဇော် မယ်မဒီ အမရာ နဲ့ နှင်းနဲ့မာယာတို့မှ တဘက်တလမ်းမှအားဖြည့် ကူညီလျှက်ရှိပါတယ်။
ယူအေအီး စာပေဟောပြောပွဲလေးမှာ ခေတ္တ အဝေးရောက် မြန်မာများ ချစ်ခင်ပျော်ရွှင်စွာ ဆုံတွေ့ကြပါစို့။။။။။။
( မှတ်ချက် ။ ။ ကန္တာရဝဿ ဆိုတဲ့ အမည်ကို အနက်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကန္တာရဆိုတာ ပူပြင်းခြောက်သွေတဲ့ဒေသ ဖြစ်ပြီး ဝဿဆိုတာကတော့ ဝဿန္တကဆင်းသက်လာတဲ့ ပါဠိစကား မိုးစက် မိုးပေါက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကန္တာရဝဿကို တိုက်ရိုက်အနက်ပြန်ရင်တော့ ကန္တာရဒေသမှာ ရွာသွန်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စေတနာ၊မေတ္တာမိုးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ယူအေအီး ကန္တာရ ဝဿလူမှုရှေ့ဆောင် အသင်းလေးဟာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ လိုအပ်နေတဲ့ လူမှုရေး ကွက်လပ်လေးတွေကို တတ်အားသရွေ့ ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ အသင်းလေးတစ်သင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
နှမငယ် နှင်းနဲ့ မာယာရဲ့ ပို့ စ်လေးကို စာပေဟောပြောပွဲအကြို၊နောက်ဆုံးသတင်းအဖြစ်တင်ပြပါတယ်...
Posted by peter kyaw | at 12:31 AM | 1 comments
ကူဝိတ်၊ ကာတာ၊ ဆော်ဒီ၊ ဘာရိန်း၊ အိုမန် အစရှိသည့် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံများတွင်မြန်မာနိုင်ငံ
သားများအများဆုံးလာရောက်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်၊့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဒုတိယစင်
ကာပူဟုပင် ခေါ်ဆိုနိုင်လောက်သည့် ကမ္ဘာကျော် ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမြို့ တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မြန်မာ့ 
စာပေဟောပြောပွဲကို မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါတယ်....
ဘာသာ၊ လူမျိူး ၊ ယဉ်ကျေးမှုခြင်းကွဲပြားခြားနားသည့် ဒေသတွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှရေကြည်ရာမြက်နုရာလာ
ရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် လူမျိူးခြား၊ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် လက်ပွန်းတတီးနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြရသည့် 
မြန်မာလူငယ်၊ လူရွယ်များအနေနှင့် ခေတ်ကာလပေါ်ပင်ယဉ်ကျေးမှုရေစီးကြောင်းအပြင် ထိုထိုနိုင်ငံသား
များ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ ၀တ်စားဆင်ယင်ပြုမူပြောဆိုနေထိုင်မှု အကျင့် စရိုက်စသည်တို့ ၏လွှမ်းမိုးမှုကို အနည်း
နှင့် အများတော့ ခံကြရမည်သာ....
ထိုအခြေအနေမျိူးတွင် မိမိ၏အမျိူး၊ ဇာတိဖြစ်သော နိုင်ငံ၊ လူမျိူး၊ ဘာသာတရားများအပေါ်ထားရှိသည့် ချစ်
မြတ်နိုးသည့် ၊ ဂုဏ်ယူသည့် စိတ်ဓါတ်များ ရှင်သန်ထက်မြက်စေရေး၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအချင်းချင်း
နွေးထွေးသည့် ဆက်ဆံမှုမျိူးဖြင့် ရိုင်းပင်းကူညီသည့် စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်ပွားများရှင်သန်ရေးတို့ သည်
ထိုသို့ မိမိတို့ ၏အမျိူးဇာတိဂုဏ်မြင့် မားစေရန်အခြေအနေများပေါ်ထွန်းတည်တံ့ နိုင်ရေးအတွက်၎င်း၊မြန်မာ
ပြည်ရှိ အကူအညီလိုအပ်လျှက်ရှိသောလူမှုရေး၊ ဘာသာရေးကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းထောက်ပံ့ နိုင်ရန်
အတွက်၎င်းယူအေအီးနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူငယ်များက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သည့် အနေဖြင့် ကန္တာရ၀ဿ
လူမှုရှေ့ ဆောင်အမည်ရှိ မြန်မာ့ လူမှုရေးအဖွဲ့ လေးတစ်ခုစုစည်းထားခဲ့ ကြပါတယ်...
ထိုအဖွဲ့ လေးမှ ယူအေအီးနိုင်ငံရောက်ရွှေမြန်မာများ အသိပညာဗဟုသုတများတိုးပွားစေဖို့ ၊ မြန်မာလူငယ်
များအချင်းချင်းရင်းနှီးချစ်ခင်စွာစုစည်းတွေ့ ဆုံနိုင်ဖို့ စသည့် ကောင်းမြတ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပထမ
ဦးဆုံးအကြိမ် မြန်မာ့ စာပေဟောပြောပွဲကို ကျင်းပနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်...
စင်္ကာပူနိုင်ငံကဲ့သို့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအခြေချနေထိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် 
( ရှိခဲ့ လျှင်လည်း မသိရှိနိုင်သေးသည့် ) အတွက် မတည်ငွေ၊ စပွန်ဆာမရရှိနိုင်သည့် ဒူဘိုင်းတွင် တရားပွဲမှ
သည် ယခုစာပေဟောပြောပွဲကဲ့ သို့ ငွေကုန်ကြေးကျများလှသည့် ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ ကားလွန်စွာမှ လွယ်
ထိုသို့ အစစအရာရာမိမိတို့ ဘာသာစိုက်ထုတ်စီစဉ်ရသည့် ကိစ္စမျိူးတွင် အများကောင်းကျိူးအတွက်မိမိတို့ 
၏လက်ရှိလုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကို ပေးဆပ်ကာအပင်ပန်းခံ၊ ၀ီရိယ
ကြီးစွာဖြင့် စိုက်ထုတ်အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် သူများကားလေးစားဂုဏ်ယူဖွယ်ရာပင်....
သို့ အတွက်ဤစာစုကိုဖတ်မိသည့် မည်သူမဆို အဝေးရောက်မြန်မာများကျင်းပသည့် စာပေဟောပြောပွဲအ
တွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူနိုင်၇န်၊ တတ်နိုင်သည့် ဘက်မှကူညီဆောင်ရွက်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ထောက်
ပံ့ ၊ လှူဒါန်းကူညီနိုင်ရန်၊ သတင်းစကားလက်ဆင့် ကမ်းနိုင်ရန် ထပ်ဆင့် တင်ပြလိုက်ရပါသည်....
စာပေဟောပြောပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ( TTMY : တောက်တိုမယ်ရ တာဝန်ယူထားသော ကိုပီတာ )
အလုပ်များနေမည်ဖြစ်ပါသဖြင့်သတင်းများတင်နိုင်ဦးမည်မဟုတ်ပါကြောင်း ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအား
Posted by peter kyaw | at 12:30 AM | 11 comments
Labels: news: Myanmar Society
ဂျပန် ဆူနာမီငလျင် အတွက်ဒေါ်လာ ၁ သန်းလှူသည့်စင်္ကာပူနိုင်ငံသူ....
ဂျပန်နိုင်ငံဆူနာမီနှင့် ငလျင်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံသူ၊ အမျိူးသမီးတစ်ဦးက အလှူငွေ
ဒေါ်လာ တစ်သန်း လှူဒါန်းခဲ့ ပါတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် သောကြာနေ့ က ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ မြောက်ပိုင်းတွင်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ သည့် ပြင်းအား ၈.၉ အ
ဆင့် ရှိသည့် ငလျင်ဒါဏ်ခံခဲ့ ရပြီးနောက်ပိုင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ကရုဏာသက်ကာ ကူညီကယ်
အများအကျိူးသယ်ပိုးသူ၊ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ သူများလည်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်လို့ တရုတ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်
စင်္ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ သည့် ငွေလှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားမှာ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ အလှူရှင်
မစ္စအီလိန်းလို ကိုယ်တိုင် ( ဒေါ်လာတစ်သန်းတန် ) ချက်လက်မှတ်ကို သံအမတ်ကြီး ယိုအီချီဆူဇူကီး ကိုပေး
မစ္စလို ဟာ အင်ဒိုနီးရှားအခြေစိုက် ကျောက်မီးသွေးသတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီ ဘာရမ် ကိုတည်ထောင်ခဲ့ သည့် အင်
ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံ၏ တတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံး၊ အသက် ၆၃ နှစ်ရှိ သူဌေးကြီးဒါတုလိုတပ်ကွမ်း ရဲ့ သမီးဖြစ်
၎င်းရဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေးအဆက်အဆံရှိပြီး ၎င်းမိသားစု၏ ဆွေမျိူးများနှင့် မိတ်ဆွေများ
လည်း ဂျပန်ပြည်တွင်နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည် ဟု မစ္စတာလို ကပြောပါတယ်...
ဆူနာမီငလျင်ဒါဏ်အပြင်းထန်ဆုံးခံခဲ့ ရသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုဟိုကူ ဒေသနှင့် ပါတ်သက်ပြီးတော့ လည်း ၎င်း
မိသားစုအနေနှင့် ကြည်နူးချမ်းမြေ့ စရာအမှတ်တရအဖြစ်အပျက်များလည်းရှိခဲ့ ပါတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်..
အလှူရှင်၊ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး....
အလှူငွေ ဒေါ်လာ ၁ သန်းဟာ မစ္စလို ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြစ်တယ်လို့ စင်္ကာပူ စထရိတ်တိုင်းသတင်းစာက ဆို
မိသားစုကုမ္ပဏီရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု အပိုင်းကဏ္ဍရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သည့် မစ္စလို ကထိုအလှူငွေ
ဒေါ်လာ ၁ သန်းကို ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် လိုအပ်သလိုအသုံးပြုဖို့ ခွင့် ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်...( ဟိုနေရာကိုလှူပါ၊
သည်နေရာကိုလှူပါ လို့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ပါဘူး...)
ထိုအလှူငွေအားလုံးကို ဂျပန်ကြက်ခြေနီအသင်းကိုပေးအပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ လည်း သတင်းကဖော်ပြခဲ့ ပါ
ဂျပန်သံရုံးပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကတော့ ၎င်းတို့ အနေနှင့် (စင်္ကာပူရှိ ) ဂျပန်အသင်းအဖွဲ့ မှ ထိုအလှူငွေနှင့် 
ပါတ်သက်ပြီး လှူဒါန်းမည့် အကြောင်း ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားမှုခံခဲ့ ရကြောင်း ညနေပိုင်းထုတ်တရုတ်သ
အချိန်တိုအတွင်း အကြောင်းကြားခဲ့ ပြီးနောက် ၎င်းတို့ အနေနှင့် မစ္စလို ကိုလက်ခံတွေ့ ဆုံဖို့ အခမ်းအနား
တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအလှူငွေ ( ဒေါ်လာ ၁ သန်း ) ဟာဆူနာမီဒုက္ခသည်တွေအတွက် ယခုအထိလက်ခံရရှိသည် အမြောက်အ
များဆုံး ( တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့ တည်း ) အလှူငွေဖြစ်ပါတယ် လို့ သံအမတ်ကြီး ဆူဇူကီးက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ယခုအချိန်အထိ စင်္ကာပူအစိုးရကတော့ဒေါ်လာ ၅ သိန်းလှူဖို့ ကတိပြုခဲ့ ပြီး စင်္ကာပူကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ရဲ့ စု
ဆောင်းကောက်ခံငွေကတော့ ဒေါ်လာ ၂ သိန်း၊ ၃ သောင်း၊ ၅ ထောင် ရှိသွားခဲ့ ပါပြီလို့ စထရိတ်တိုင်းမ် သ
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ အစ္စလာမ်မစ်ကောင်စီမှလည်း အလှူငွေများကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်...
လှူတဲ့ သူကလည်း ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါသလို လက်ခံသည့် နိုင်ငံကလည်း ဘာတံဆိပ်မှမကပ်ပဲ အမှန်
တစ်ကယ်လုပ်ဆောင်မည့် အဖွဲ့ သို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးတာကတော့ ပိုလို့ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာပါပဲ...
Posted by peter kyaw | at 1:14 AM | 10 comments
Labels: news: asiaone
'We just don't know why our son is so big': A day ...
Panic salt buyer finds he can't sell or transport ...
Father who 'died' for 45 minutes brought back to l...
Chinese wall of humanity: Incredible sight as 200,...
၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်၊ ကြည်နူးချမ်းမြေ့ ၊ လွမ်းဆွ...
ပထမဆုံးအကြိမ် ယူအေအီး စာပေဟောပြောပွဲ မနက်ဖြန် မတ...
Export hopes for schoolboy urine boiled eggs
Kiss costs man4months, 120 lashes
Stealing chicken drumstick lands man in prison
MP caught on camera playing air guitar in Parliame...
Kenyan MP fights for right to wear 'bling'
Facts About Gadaffi's Amazonian Guard
Gypsy wife becomes world's youngest grandmother......
Bini-Me: Tiny rebel ‘Osama’ is video star
Bling It On! A shopping guide for the seriously ri...
Man has picture of two loves in life on gravestone
Current Longest Serving World Leaders. Then & Now
Amazon eve, soon-to-be world's tallest model
Weather Forecasts in Latin America and Middle East
The secret to living to be 103 revealed: 'I've nev...